Munamato kuUtatu Hutsvene. ? Rudo, Zvakaoma uye Inokurumidza Mhosva.
11 Kuverenga Min
Namata kuna Utatu hutsvene Katurike yerudo, yakaoma uye inokurumidza kesi uye kudzivirirwa ndiyo imwe yeane simba sezvo ichibvunza Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene zvakafanana.
Izwi raMwari rinotiratidza ndiMwari baba vezvinhu zvese, zvobva zvatisvitsa kuna Jesu Kristu iye mumwechete iye Mwari akagadzira munhu, aive pakati pedu uye akapa hupenyu hwake nekuda kwevanhu, paakaenda kudenga akatisiyira kuMweya Santo uye ikozvino isu tinogona kutarisira pane ese matatu.
Baba neMwanakomana vari kudenga uye neMweya Mutsvene unofamba mumoyo yedu semoto.
Chechi yeKaturike ine akateedzana minamato inotungamirwa kunyanya kune vatatu avo pamwechete vari mumwe, humwari huMwari.
Iyi minamato inosimuka mune dzakasiyana siyana uko ruoko rwemunhu uye rwusingagone kushanda uye saka isu tinovimba nemunamato nekuti chishamiso chaMwari chete chakakwanira.
1 Munamato kuna iye Musande Utatu Ndiani Mutsvene Mutsvene?
1.1 Munamato kuChitendero chitsvene cheKaturike
1.2 Munamato kuVamwari Vatatu vorudo
1.3 Munamato weUtsvene Unoyera kumatare akaoma uye anokurumidza
1.4 Ipfupi yekudzivirirwa
2 Ndogona kunyengetera rini?
Munamato kuna iye Musande Utatu Ndiani Mutsvene Mutsvene?
Kubatanidzwa kwaBaba; Mwanakomana neMweya Mutsvene ndevaya vanoumba Utatu hutsvene.
Kuonekwa kwake kwaive zvishoma nezvishoma uye tinokwanisa kuvaona munguva yese Bhaibheri.
Pakutanga, mune genesis Mwari anooneka achigadzira matenga nepasi uye chimwe nechimwe chipenyu.
Ipapo mumavhidhiyo a Testamente Itsva tinoona kuti Jesu Kristu anosvika, akazvarwa nemhandara nebasa nenyasha dzeMweya Mutsvene.
Ikoko tinotanga kuziva hupenyu hwese hweMuponesi, ipapo kana achinge afa, amuka uye akakwira kudenga, anotisiira isu vimbiso yeMweya Mutsvene, asi izvi hazvina kuratidzwa kusvikira mushure menguva muzuva rePentekosti inorondedzerwa mubhuku reMabasa e. VaApostora uye vanoramba vachitiperekedza nanhasi.
Utongi Hune Simba hwakapihwa kwatiri nezvikumbiro zvemoyo wedu, izvo zvatinowanzoita kubva kumweya.
Utatu Hutsvene hunogara takagadzirira kutiteerera.
Munamato kuChitendero chitsvene cheKaturike
Ini ndinokuda iwe, Mweya Mutsvene paraclito, kuna Mwari wangu naIshe, uye ndinokutendai nekusingaperi nedare rese rekudenga muzita reMukurumbira Mhandara, Mukadzi wako ane rudo nezvezvose zvipo uye neruzivo rwamakashongedza naye, kunyanya kune iye akakwana uye nehumwari. rudo rwawakavhenekera narwo moyo wake unoyera uye wakachena mukuita kwoKukurumbira kwake kukuru kudenga. uye nekuzvininipisa ndinokukumbira muzita reMukadzi wako asinganzwisisike, ndipeiwo nyasha kuti mundiregerere zvivi zvese zvakaipisisa zvandakaita kubva panguva yekutanga yandingatadza; kune ikozvino, yandinoshungurudza kwazvo, nechinangwa chekufa pane kutadzira ukuru hwenyu Mwari; uye nekukwira kwakanyanya uye nekudzivirira kwakanyanya kweMukadzi wako ane rudo kwazvo ndinokumbira kuti undipe ini naN. chipo chakakosha kwazvo chenyasha dzako nerudo rwemweya, nekundipa iwo mwenje uye nerubatsiro rwakapihwa neDare rako risingagumi rakafanoronga kuzondiponesa, uye unditungamirire kuna hongu
Munamato weVamwari Vatsvene veKaturike ine mhedzisiro.
Munamato, chombo chine simba icho ndechedu chete isu vakatenda musimba raIshe.
Chishandiso chine simba icho Chechi yeKaturike yaiziva mashandisiro uye icho chinotisiira isu muenzaniso, semuenzaniso kuti tizive mabvunzi, mazwi api ekushandisa.
Munamato hauna kushata, iwo mukana wekushaisa munamato, kudzidza kunyengetera nemazvo, ndosaka minamato iripo kuti ititungamirire mukuita kwacho.
Munamato kuVamwari Vatatu vorudo
Muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene, Ameni.
Hutatu hutsvene, kutanga kwedu nemhedzisiro, simba rangu nerubatsiro rwangu uye nerubatsiro rwangu rwewamwari, uyo anogara mumoyo mangu uye aripo mune mumweya wangu uye anofukidza huwandu hwangu hwese.
Vakarumbidzwa Vatsvene Vatatu, vakafanirwa nerukudzo rwese, kubwinya nekurumbidzwa, ndinotenda musimba Rako, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene.
Ndinovimba nemeso ako zvipo uye ndinovimba mamuri, uye tariro yangu nerudo rwangu Ndinoisa mumaoko ako, ndibatsireiwo kuwedzera rutendo rwangu uye zuva rega rega nerudo rwako uve munhu ari nani uye unomuka uzere nekurudziro uye kushingairira.
Mwari Akaropafadzwa, ndimi manyuko munobva rudo neupenyu, kuti makatisika zvinoenderana nemufananidzo uye nekufanana, uye kuti nerudo kwatiri makatumira Mwari Mwanakomana kuti noupenyu hwake atidzikinure uye atinunure kubva kuchivi, ini ...
(Taura zita rako)
Ini ndinokupa uye ndinoitsaura zvese zvinogara mukati mangu uye ndine urombo zvikuru ndinokumbira kuti mundiregerere pazvitadzo zvese zvandakaita uye nezvezvitadzo zvandakaita nanhasi uye zvinondiparadzanisa nemi.
Hutatu hutsvene, ndinokumbira kuti mundinzwire ngoni, uye mundipe rubatsiro, kuti mweya wangu uzadzike nerunyararo, ndichizvishandura kuva murwere, nzwisiso, anozvininipisa uye akapfeka kunaka kwako.
Mweya Wakachena Unorumbidzwa, tsime rekunyaradza kwese, ndinokukumbira kuti uwedzere mweya wangu neuwandu hwezvipo zvako.
Imi muri tariro yangu nenhoo yangu muhondo dzangu, imi simba rangu mukutambudzika nekuzvidya moyo.
Nechikonzero ichi ini ndauya nemabvi angu pamberi pako kuti ndikumbire iwe kuti utambanudzire ruoko rwako rubatsiro uye undireverere pamberi paMwari Baba kuti ugamuchire rubatsiro rwake runokurumidza.
Mweya Mutsvene wekudenga, mutsva simba rangu uye wedzera kushinga kwangu kuti ndienderere mberi nehondo iyi yandinotarisana nayo, ndapota nditsamira nzeve yako kunongedza kuteterera kwangu uye ndipe zvandiri kukuda uye ndikubvunze nhasi.
Ndokumbirawo muchivhenekera mumoyo mangu rudo rwaMwari runovhenekera moyo yevateveri venyu vakatendeka. Kune rudo, Simba uye Ngoni ndinokumbira kuti mundisunungure kubva pamatambudziko ese, uye kuti hapana chinokanganisa rugare rwangu kana kunditambudza.
Hutatu hutsvene, ini ndinouya nekuvimba kwakazara Kwamuri, uye nekutenda kwese kwemweya wangu, kuti mugone kuderedza kushungurudzika kunonditambudza kwazvo, ndapota ndiporese maronda emoyo wangu uye mudururire tsitsi dzenyu pandiri uye izvo zvandinoda nezvakawanda. kukurumidza:
(Taurira Utatu Hutsvene zvaunoda nekukurumidza uye kumbira rubatsiro rwavo runokudzwa)
Mwari Baba, ndinokutendai nekuti munoteerera minamato yangu, nerudo rwenyu infinito, uye nekuda kwekuchengetedzeka uko rudo rwenyu runondipa, kuti runondichengetedza uye kundinyaradza.
Ndinokukumbira kuti mundibatsire, Mutsvene Mutsvene, ndinokumbira kuti mureverere uye kunakirwa kweMhandara Yakaropafadzwa Maria, Amai vaJesu naamai vedu.
Wakafarira here Holy Holy munamato we rudo?
Rudo runogara iri injini yeminamato yedu, kunyangwe ichitifambisa kukumbira vamwe kana isu kukumbira rudo kuyambuka nzira yedu.
Chero zvazvingave, chinhu chakakosha kubvunza kubva pamoyo, kubva mumweya uye nekutenda kwakawanda.
Chinoita kuti minamato yedu ive nesimba uye tiwane mhinduro ndeyekuti tinotenda kuti izvo zvatinokumbira zvinogona kupihwa.
Kukumbira rudo, kuti tizive nzira yekuzvizivisa panguva iyo inoyambuka nzira yedu ndiko kwakakosha zvakanyanya sezvo izwi raMwari rinodzidzisa kuti moyo unonyengera uye zvinogona kutiita kuti titende kuti isu tinowana rudo kana zvisipo.
Ichi ndicho chikonzero kuve nhungamiro yeUtatu Hutsvene chinenge chiri chiito chehupenyu nerufu.
Munamato weUtsvene Unoyera kumatare akaoma uye anokurumidza
Utatu hutsvene, Utatu Mwari uye Mumwe, Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene, kutanga kwedu nemhedzisiro, tinamate pamberi Penyu ini ndinobhadhara rukudzo: ngaarumbidzwe uye ngaarumbidzwe ihwo huMwari Hutatu! Kwauri, Utatu Hutsvene ngaruve rukudzo, mbiri nekurumbidzwa nekusingaperi, ndinotenda mauri nemoyo wangu wese uye ndinoshuva kuve akatendeka wamunonamata, ndinouya kwaMuri nechivimbo chakazara kuti ndikubvunzei kuti munondiona ndakasununguka kubva pane zvakaipa nguva kubva kune vese Nedambudziko nenjodzi, uye mukushayiwa kwangu, ndinokukumbira, ndipewo tsitsi dzako.
Baba veKudenga, Jesu Mufudzi Akanaka, Mweya Mutsvene, ndinokukumbira iwe kuti uveregerere uye unakirwe neMhandara Yakaropafadzwa Maria, ndipe rubatsiro rwako, nhungamiro nedziviriro muzvinhu zvese nezvinonetsa zvehupenyu hwangu.
Mbiri kuna Iwe Mwari Baba, tsime rerunako uye huchenjeri hwokusingaperi, hupenyu hunobva kwauri, rudo runobva kwauri, ita kuti pese pese kushanda nekururama uye nehungwaru kunakidzwa nezvinhu uye nyaradzo iwe zvaunonditumira; Rangarira kuti ndiri mwana wako, uye ndinzwire tsitsi kutambudzika kwangu, zvido zvangu uye undibatsirewo panguva yakaoma iyi:
(bvunza uine kutenda kukuru zvaunoda kuzadzisa)
Maita basa, baba vane tsitsi nekuvapo.
Rukudzo kuna Iwe Mwari Mwanakomana waBaba Vekudenga mune iye Mwoyo Unoyera mweya wangu unowana utiziro, ndidzidzise kutevedzera nekuvimbika hupenyu hwako nehunhu hwako, ndipe kutsiga nekutsungirira kuti ndizadzikise dzidziso dzako uye uite kuti ndiite mabasa erudo anoshanda kazhinji, usandisiya mukati Nhamo dzemazuva ese, ndisunungure kubva muhusungwa hwandakaitirwa nemuvengi, andibvise kure uye undidzivirire kubva kunhamo dzose dzinondinetsa uye ndipe rubatsiro rwako rwechishamiso padambudziko iri: (dzokorora chikumbiro netariro huru).
Ndinokutendai Jesu wangu akanaka nekuve padivi rangu munguva dzekusagadzikana nekushungurudzika.
Rukudzo kwauri Iwe Mweya Mutsvene, kujekeswa kunovhenekera zvinhu zvese, uye kuti iwe uri mufaro, kuwirirana uye mufaro wechisiko, ita kuti zviite nguva dzose kune yako kukurudziro yeumwari ndipe rugare, ndipe rubatsiro mune zvangu zvisina nematambudziko uye undipe rubatsiro rwako kuitira kuti ndikwanise kuwana zvandinoda zvakanyanya izvozvi.
Ndatenda Vamwari Vemweya werudo nekundibatsira kana zvese zvakasviba uye ndinoda Chiedza.
Amai naMambokadzi vangu, Mukadzi weDenga Iwe iwe uri padyo zvakanyanya neVamwari Vatsvene unondinamatira pamwe nematambudziko angu uye zvikanganiso, iva Iwe Gweta rangu nehafu kuitira kuti kukumbira kwangu kuendwe, ndiite kuti ndiwane chishamiso chandinonyanya kuda mukati hupenyu hwangu
Ndatenda amai vangu vandinoda, akaropafadzwa Mhandara Maria, nekuve nekunzwisisa uye kugara muchiteerera.
Utatu hwamwari, Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene, ndipeiwo tsitsi dzenyu, ndipeiwo mutsa wenyu uye mundipe mhinduro nekukurumidza mukushungurudzika kwangu uye nekushushikana.
Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene, Vakarumbidzwa uye Vatsvene Vatsvene, ndinokuda, ndinokuda uye ndinokupa kuve wangu.
O Utatu hweRudo, Mwari wetsitsi, ini ndinozvisiya pachedu kune Hwako hweVamwari, nekuti nguva dzenyu dzakakwana uye imi chete Munoziva izvo zvakandinakira, Mbiri kuna Baba, Mbiri kune Mwanakomana, Mbiri kune Mweya Mutsvene, mbiri kune Vakarumbidzwa uye vasina mhosva. Trinidad, sezvazvaive pakutanga, ikozvino uye nekusingaperi, kubva narinhi narinhi.
Idzo zviitiko apo pasina chinhu chevanhu zvinobvira chatingaite.
Zviitiko izvozvo kwavakatipa kuongororwa kwechiremba, uko imwe nhengo yemhuri yanyangarika, ipo mwana anoda rubatsiro rwaMwari uye asingazvizive kana asingade kuzvibvunza, kutambudzika, kurwadziwa, kusasimba, kusagadzikana uye mamwe mamiriro nemanzwiro anoita kuti tiwedzere kuda varimo mune iro ruoko rune simba rwaMwari runofamba nesimba.
Holy Munamato munamato inogona kuve yedu rubatsiro munguva pfupi mukati mematambudziko akaoma kugadzirisa.
Zvese chiitiko chekutenda uye kuvimba naIshe, vachitenda kuti ane masimba ezvese zvinhu uye kuti anoziva zvaari kuita.
Ndinokutendai nekukuremekedzai, O Mhandara Tsvenetsvene, Mambokadzi weKudenga, Mukadzi uye Patroness wepasi rose, seMwanasikana waBaba vasingaperi, Amai veMwanakomana wake anodiwa kwazvo, uye Mukadzi ane rudo kwazvo weMweya Mutsvene; uye namata patsoka dzeMambo wako mukuru nekuzvininipisa kukuru ndinokukumbira nekuda kwerudo rwuya rweMwari; kuti iwe waive uzere zvakanyanya muKufunga kwako kuenda kudenga, kuti unondipa imwe chete nyasha uye tsitsi zvekundiisa pasi pechengetedzo yako yakatendeka uye yakatendeka, uye yekundigamuchira muhuwandu hwevaranda vanofara uye vane rombo rakanaka iwe waunotakura wakavezwa pazamu rako remhandara.
Zviremekedze, haiwa Amai uye Mai vangu vane tsitsi zhinji, kugamuchira moyo wangu unosiririsa, ndangariro yangu, kuda kwangu, uye mamwe masimba emukati nekunze nemanzwiro angu; Gamuchira maziso angu, nzeve dzangu, muromo wangu, maoko angu netsoka dzangu, uzvitonge maererano nekutenderwa kweMwanakomana wako, kuitira kuti nekufamba kwake kwese kwaanoda kukupa kukudzwa kusingaperi.
Uye nezveuchenjeri uhwo Mwanakomana wako anodiwa akakujekesera iwe, ndinokumbira uye ndinokumbira kuti undiunzire mwenje uye kujekeseka kuti ndizive pachangu, kusava kwangu, uye kunyanya zvivi zvangu, kuti muvengwe nekuvengwa navo nguva dzese, uye ndisvikewo kwandiri shuwa kuti ndizive misungo yemuvengi asingazivikanwe pamwe nekuvanzika kwayo pamwe nekuratidzira mitezo.
Kunyanya, Amai vanotya Mwari, ndinokumbira nyasha dzenyu ... (taura).
Izvi munamato unoshamisa Ala Santísima Trinidad kukumbira hutano hwedu, kuchengetedzwa uye kubudirira kwakasimba kwazvo!
Anotidzivirira, anotitarisira y titungamire kuti ndiite chete izvo zvinodiwa naMwari. Tinogona kukumbira kudzivirirwa isu pachedu kana nemhuri yedu uye neshamwari.
Rangarira kuti izvi zvese zvakanaka masimba anoyerera achibva kwatiri achiwedzera zvese zvakatipoteredza.
Hapana chinhu icho hutatu hwaMwari husingagoni kutidzivirira kubva kwazviri, hapana chinhu chakasimba kana chine simba kupfuura Mwari, ndosaka tichivimba kuti ndiye anotitarisira isu nekwedu zvisinei nekuti varipi.
Unogona kunyengetera chero nguva yaunoda.
Munamato kuHutatu Unoyera hauna zuva rakakodzera, awa kana nguva.
Tinofanira kunyengetera kana tichida kunyengetera. Isu tinofanirwa kuve nekutenda uye tinogara tichitenda kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka.
Munamato kuna Saint Martin Knight